Aluminium pastes yekiriniki ine aerated
Zvishandiso uye zvemhando yepamusoro eerated aluminium poda
ne admin pane 21-01-13
Kune akawanda akapatsanurwa eairated aluminium poda. Mhando dzakasiyana dzine dzakasiyana dzakatarwa mitsara, uye mashandisiro uye mashandiro acho akasiyana zvakanyanya. Aerated aluminium poda inofanirwa kushandiswa kune zvakakosha zvinangwa, saka ine yakasimba zvimiro zvemhando yepamusoro. Icho chiitiko ...
Cold yekushanda nzira yekugadzira aluminium poda yekuisa uye maitiro ekuichengeta
Aluminium poda poda rudzi rwemakemikari mbishi zvinhu, izvo zvave zvichishandiswa zvakanyanya neanoenderana maindasitiri uye akaita basa rakakura. Aluminium poda ine zvakare zvimwe zvinodiwa pane yayo maitiro panguva yekugadzira maitiro, kazhinji kushandisa michina nzira uye inotonhora worki ...
Mhando dzakasiyana dzealuminium pigments uye aluminium poda yekugadzirisa nzira
ne admin pane 19-06-03
Seye indasitiri mbishi zvinhu, aluminium poda inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemazuva ano, uye maindasitiri akadai seanopikisa zvinhu, zvedongo alloys, uye kemikari simbi inoda kuiswa. Nekuda kwemusiyano mukugadzirwa kwemaitiro, iwo maitiro ari pasi peelectron m ...
Suqian Teng'an Nyowani Zvekuvakira Co, Ltd. (yaimbove Huai'an Jiayi Building Material Co., Ltd.)
Runhare: +86 15252409018
Pane chero zvigadzirwa zvaunoda?
Zvinoenderana nezvamunoda, gadzirisa iwe, uye nekukupa iwe nezvimwe zvakakosha zvigadzirwa.